कसरी सिर्जना गर्न र कसरी ताना हटाउन?
"Maynkraft" मा बहु मोड लागि धेरै सार्वजनिक सर्भर एक मोड को अस्तित्व भन्दा अलि फरक विशिष्टता छ। तिनीहरूलाई बीच संचार बोक्न खेलाडीहरूलाई अक्सर teleportation समारोह प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई तर, improvised हालतमा देखि पोर्टल सिर्जना गर्न प्रत्येक समय र यति मा - यो धेरै सुविधाजनक विधि छैन। किन ताना बनाउन अनुमति दिने, प्लगइन सिर्जना गरिएको छ। उहाँले यस कठिन समस्या हल, र अब खेलाडीहरूलाई सजिलै पर्याप्त मूल्य भुक्तानी भने, नक्सा मार्फत teleport गर्न सक्नुहुन्छ। यस लेखमा तपाईं यो रूपमा ताना बनाउन के, तपाईं आवश्यक छैन भने, ताना हटाउन कसरी रूपमा साथै सिक्न हुनेछ।
को ताना के हो?
तपाईं कसरी बनाउन विचार वा ताना मेटाउनेछ अघि, तपाईं राम्रो यो सिद्धान्त के छ बाहिर आंकडा। त्यसैले, ताना - यो जो तपाईं कुनै पनि स्रोतहरू खर्च, बिना कुनै पनि समयमा teleport सक्नुहुन्छ नक्सा, मा एक निश्चित विन्दु हो। तपाईं अब पोर्टल सिर्जना गर्न आवश्यक छ, इच्छित परिणाम हासिल गर्न थप सर्जरी प्रदर्शन। यो teleport यसलाई कुनै शारीरिक फारम छ, जसको अर्थ खेल ठाउँ बाहिर अवस्थित छ। उनले निर्देशांक मनाइन्छ, र यो छ। तर तपाईं यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आदेशहरू एक नम्बर छन्। स्वाभाविक, तिनीहरूलाई बीचमा सबै भन्दा लोकप्रिय भनेर ताना बनाउन र प्राप्त यो छुटकारा अनुमति हुन्छन्। अर्को, तपाईं teleport यस प्रकारको सिर्जना गर्न धेरै नै टोली सिक्न र आवश्यक भएमा कसरी, को ताना हटाउन बुझ्न हुनेछ।
एक ताना सिर्जना गर्न, तपाईंले जहाँ तपाईं आफ्नो teleport फेला पार्न चाहेको बिन्दु यहाँ जान आवश्यक छ। त्यसपछि यसको सिर्जना धेरै लायक छ किनभने तपाईं उपलब्ध 75 emeralds छ भनेर निश्चित गर्न आवश्यक छ। तपाईं चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ताना छ, सबैलाई यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं ताना आदेश सिर्जना प्रयोग गर्न आवश्यक हुनेछ, त्यसपछि नाम निर्दिष्ट, सार्वजनिक भएको थियो। ताना pcreate (को पाठ्यक्रम, आदेश पछि नाम) - तपाईंले आफ्नो teleport यो 75 emeralds लागि भुक्तानी नगर्ने ती खेलाडीहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं अर्को आदेश प्रयोग गर्नुपर्छ। यस मामला मा, एक निजी ताना, जो केवल तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खैर, अब तपाईं आफूलाई teleports लागि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ - यो ताना कसरी हटाउन सिक्न मात्र रहनेछ।
लेखको अन्तिम भाग मा, तपाईं कसरी "Maynkraft" मा ताना हटाउन सिक्न छौँ। यो गर्न, तपाईं को आवश्यकता एक टोली ताना मेटाउन - यो पछि परम्परा तपाईं नाम, तपाईं अवस्थित ताना नाम लेख्न आवश्यक हुनेछ केवल यो समय निर्दिष्ट गर्न आवश्यक हुनेछ। दुर्भाग्यवश, teleport को पनि हटाउने मुक्त हुने छैन - के तपाईं कि, छ 25 emeralds, सिर्जना लागि भुक्तानी भन्दा तीन पटक कम पैसा तिर्न छ। तपाईं पनि ताना हटान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो केहि परिवर्तन गर्दैन। बस ताना तपाईं चाहनुहुन्छ ठाउँमा छैन तपाईं सेट भने, हटाउने आफ्नो समय लाग्न। के तपाईं खडा छन् जहाँ कुनै पनि ठाउँमा अवस्थित ताना सार्न सक्नुहुन्छ - तर यसको लागि पनि emeralds भुक्तानी गर्न छ। तर तपाईं आधारभूत जानकारी भयो - अब तपाईं कसरी सर्भर मा ताना हटाउन थाहा छ।
खेल समीक्षा "प्रेत Coles"
इन्द्रेणी unicorn बारेमा खेल को एक श्रृंखला
"काउन्टर स्ट्राइक Sours" गर्न Cheats के हुन्? प्रजाति र सबैभन्दा लोकप्रिय फेसन
रोमी पल्टनमा कमाण्डर Dota 2: गाइड, विशेष गरी खण्डमा र सिफारिसहरू
"अवतार" मा निःशुल्क वीआईपी कसरी प्राप्त गर्न, वा वीआईपी-स्थिति सबै
जासूस "अवस्था पहेली" जवाफ साथ। हास्यास्पद जवाफ संग "अवस्था पहेली"
छुट्टीको लागि उत्कृष्ट विचार: एक सालगिरह लाटरी
वर्णन, खेती सुविधा र समीक्षा: उपनगर लागि gooseberries को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू
कन्टिनेन्टल घण्टा: लामबद्ध र समीक्षा
मोन्टेरे, संविधानसभा: आकर्षण र फोटो
नाम को मूल अलेक्जेन्डर यसलाई पूरा गर्न obliges
कथा "स्मार्ट कामदार।" बच्चाहरु को लागि रूसी लोक Tales
Capelin लागि नुस्खा।
चिनियाँ बन्दागोभी संग झिंगा सलाद: स्वादिष्ट सरल र उपयोगी!
Levomitsitinovye eyedrops। सङ्केत गर्छ र प्रयोगको लागि निर्देशन